Tracts - Fante - Fear No Evil
Nnsuro Mbusu Biara
Me pɛ dɛ mibisa hom asɛm dze hyɛ dza yɛrebɛka ho asɛm yi ase. Ehwɛ a wɔahom hã wo ho papaapa anaa ewɔ sunsum mu atseetsee na suro nhyɛ mu? Nkorɔfo pii wɔ hɔ a wɔghy hɔn ho dzi dɛ wɔtse ahomkã mu, na dɛ meyɛ Sɔfo yi, mu hu hɛ pii wɔ hɔ a wɔnntse ahomka mu. Iyi na ɔama ɔwɔ dɛ mekyerɛ hom mbrɛ ɔbra tse. Hɔn a wɔkyerɛɛw Baebor no mu kor ka kyerɛ hɛn dɛ aber a Christ a ɔyɛ hɛn nkwã bopuei no nna mbrɛana yɛahyɛ ɔbra ase a.
Sɛ wɔwo nyimpa gu wiadze yi mu a, nna wɔawo hɔn egu owu mu. Siantsir kor pɛr na ɔnam do ma wɔbaa wiadze yi mu, na ɔno nye owu. Paul nsɛmpa no ka kyerɛ hɛn dɛ yɛwɔ nhyɛ wɔ hɛn bra mu, osian owu ho suro ntsi. Mbom sɛ hom nyim a, wɔwo nyimpa to Nyankapɔn aheman mu a nna wɔawo no ato nkwã mu. Nkwã a suro biara mmfam ho na Nyankopɔn pɛ dɛ nyimpa tsena mu. ɔdɛ onnyi dɛ yɛma kwan ma ‘suro’ tseetsee hɛn akoma.
Iyi ntsi, yenhu dɛ ɔwɔ dɛ yɛtwe hɛn akoma fi atseetsee ho. Mfaso nnyi ho dɛ dza hɛnara botum ayɛ no yebebisa Nyankopɔn dɛ ɔnyɛ mma hɛn. Dza ohia nye mpaabɔ a ɔbɛma hɛn ahoɔdzen ma yɛayɛ dza noana hyɛ hɛn dɛ yɛnyɛ. Ama yɛatwe hɛn akoma efi ɔbra atseetsee na akokyer mu no, ɔwɔ dɛ yenya gyedzi wɔ Ewuradze no dɔ anohoba no mu; yenya awerɛhyɛ mu wɔ Ewuradze mu; na yɛdze hɛn akoma nyinara gye no dzi, na ɔbɛma Suro, atseetsee na ahokyer nyina etwa mu abɛsen.
David dɛ, “Munnkosuro Mbusu Biara”. Jesus so dɛ, “Mma mma Ɔakoma nnya suro”. Nyankopɔn amma obiara suro sunsum. Suro yɛ abɔnsam dze. Mma yennsuro ohia osiandɛ ohia yɛ abɔnsam. Sɛ isuro a nna nnyi guedzi wɔ Nyame n’asɛm no mu. Ɔdɛ, wɔ biribiara mu no, ɔnnkɛma yeehia hwee. Yebenya apɔwmutse na hɛn kra mpo nnkehia hwee.
Sɛ ennya gyedzi a Nyankopɔn enyi nngye wo ho. Dza gyedzi nnyi mu no yɛ bɔn, osiandɛ gyedzi na ctsew hɛn ho. Adom nam gyedzi do gye hɛn nkwã. Sɛ isuro yarba a nna nnyi gyedzi wɔ Nyame n’asɛm no mu osiandɛ Nyamesɛm dɛ, “Emi nye wo Nyankopɔn no a ɔdze wo bɔn nyina kyɛ wo, na ɔma yarsa wɔ wo nyarba nyarba nyinara mu no”. Kaa dɛ yennkosuro anokum anaa bɔn a otsia hɛn, na biara nnkotum apaa hɛn efi Nyankopɔn no dɔ ho. Abɔnsam mpo nnyi tum wɔ iyi ho, gyedɛ woara nam wo pɛ do fi Ewuradze nkyɛn. Ɔnam dɛ abɔnsam dze ahonya na bɔn daadaa hɛn, ntsi sɛ eyɛ dɛm a, Baebor kyerɛ dɛ, nna nnyim Nyankopɔn anaaso ennhu no. Ntsi yehu dɛ Nyankopɔn yɛ bambɔfo ma hɛn aber biara.
Sɛ nyimpa dadaw nu a eyew ɔdɔ a ewɔ no wiadze ho nna no mu ndzɛmba nyinara, na sɛ nyimpa fofor, dɛ ɔyɛ Christ, ba a ɔsor aheman mu ndzɛmba na n’enyi gye ho. No nkɔmbɔ dzi mpo yɛ krɔnkrɔn osiandɛ ɔyɛ abɔdze fofor. Baebor dɛ, “Hwɛ! ndzɛmba adadaw nyina botwa mu na dza ɔbɛka no bɛyɛ afofor”.
Akɔdaa David so dɛ, “Mohwehwɛɛ Ewuradze na otsei me, na oyii me fii mosuro mu”. Ebɛnadze ntsi na ema abɔnsam kwan na ɔdze suro, atseetsee na adwen nsakyer sɛe w’adwen na w’akoma? Ana ɔwɔ dɛ ɔhyɛ wo ma eyɛ dza onnyi w’adwen mu? Nyankopɔn dɛ, “Mennkɛma enya nsɔhwɛ a ɔbor wo do, na ɔbɛma afa nsɔhwɛ noara do efi ahokyer mu epuei na ayɛ dza ibotum”. Ɔdɛ yenyi adwen fiefiew akwa na yɛmfa adwendwen biara mma gyedzi na yɛngye asɛm no ndzi.
Yi wo honam akɔndɔ na onnsipi adwen akwa. Kasa na dwen Nyankopɔn n’asɛm ho. Ma ɔntsena wo mu na dɔ no. Kã ho asɛm. Fa yɛ ndwom tow. Ma ɔnyɛ w’akoma n’ahwehwɛ dze. Sɛ edze w’adwen si Christ Jesus do pi a benya asomdwee a ɔmmɔ adze da. Otsiɔdzenyi biara nnyim asomdwee. Nyankopɔn dɛ, gyedzi asɛm no atsew hɛn ho, na iyi na Jesus rekã dɛ “Mma nnsuro”.
Se isuro ennhu nyame etumbo a, dza wɔpɛ na ebɛyɛ ama hɔn. Wɔbɛyɛ wo do ahwɛdofo na bɛyɛ hɔn akowaa nna ɔkyerɛ dɛ akɛhyɛ hɔn nhyɛ tum ase.
Sɔfo George Leon Pike Sr.
FAN9907T • FANTE • FEAR NO EVIL